बेबी आई लभ यूः पहिलो हाफ हाँसो, दोस्रो हाफ आँशु
चलचित्रः ‘बेबी आई लभ यू’
निर्देशकः जनक पाण्डे
निर्माताः शिव न्यौपाने
सह–निर्माताः सिर्जना परियाररदुर्गा पाण्डे
कलाकारः सरोज खनाल, सन्तोष खड्गी, पुजा तिवारी, निर्मल शर्मा ‘गैंडा’, राजु कमेडी, रेशम बुढाथोकी, अप्सन पन्थी, बिमल गिरी, कृष्ण शर्मा ।
प्रेम कथा मन पराउने दर्शकको लागि चलचित्र ‘बेबी आई लभ यू’ मन पर्न सक्छ । शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्रले व्यवसाय राम्रो गर्छ÷गर्दैन त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ । तर, सुरुवाती व्यवसाय भने चलचित्रले राम्रो गर्न सफल भएको छ ।
भिन्न प्रेमकथामा बनेको चलचित्र भएकाले पनि यसले व्यवसायीक रफ्तार पक्रन सफल भएको निर्माण युनिटको दावी छ । चलचित्रले युवा पुस्तालाई हलसम्म तान्न सफल देखिएको छ ।
प्रेम कथालाई भिन्न प्रस्तुतीका साथ देखाइएकाले पनि दर्शक तान्न सफल भएको निर्देशक जनक पाण्डेले बताए । ‘तँ, तँ र म म’ बाट सुरु भएको चलचित्रमा दर्शकलाई पहिलो हाफमा हाँसोले तान्ने र दोस्रो हाफमा आँशु झार्न बाध्य पार्ने प्रेमकथा बुनिएको छ ।
विभिन्न सामाजिक विसंगतीलाई समेत उजागार गर्ने प्रयास गरेको चलचित्रले मल्टिपेक्स र सिंगल थियटरमा राम्रो दर्शक पाइरहेको व्यवसायीक शुभसंकेत हुनसक्छ ।
सन्तोष खड्गी समर र पुजा तिवारी सायराको प्रेमको पेरिफेरीमा घुमेको छ चलचित्र । एक गाडीमा भएको भेटसँगै उनीहरुको प्रेम सुरु हुन्छ । सानैमा आमा गुमाएका बाबुको लालनपालनमा हुर्केका समरले काम गर्ने अफिसमा सायरा पुग्छिन् । त्यही उनीहरुको दोस्रो भेट हुन्छ ।
त्यसपछि भने चलचित्रको कथाले गति लिन्छ । सायरा कुन उद्देश्यले समरको अफिस पुगेकी हुन्छिन् ? उनीहरुबीच प्रेम बस्छ÷बस्दैन ? त्यो थाहा पाउन चलचित्र पूरै हेर्न पर्ने हुन्छ ।
उनीहरुको प्रेमलाई परिवारले स्वीकार नगर्दा प्रेमी प्रेमिकाले गर्ने संघर्ष । प्रेमका लागि प्रेमिकाले आफ्नो जीवनसँग गर्ने सम्झौतालगायत अनेकौं प्लटमार्फत चलचित्रसँग दर्शक जोड्ने काम गरिएको छ ।
पहिलो हाफसम्म समर र सायराको प्रेम हुन्छ कि हुँदैन् ? भन्ने खालको कौतुहलता जगाउने कथाले दर्शकलाई रोमान्टिक तुल्याउँछ भने दोस्रो हाफमा उनीहरुको जीवनमा आइपर्ने अनेकौं समस्याले दर्शकको आँखा रसाउन केही क्षण लाग्दैन । सायद पटकथा लेखकको यो नै सफलता होला ।
सायरा र समरले सुरुदेखि अन्त्यसम्म बोकेको कथामा कथा अनुसार पात्रको आवतजावत भइरहन्छ । अनेक पात्र राख्ने र ती पात्रका अभिनय लब्म्याउने झन्झण्टबाट मुक्त छ चलचित्र ।
सही ठाउँमा पात्रलाई भित्र्याउने र आवश्यकतापछि नलम्ब्याउने झन्झट गरेका निर्देशकको केही गल्तीमा मौन रहने हो भने काम तारिफयोग्य नै छ । उत्कृष्ट छायांकनसहित प्रस्तुत गरिएको चलचित्रको गीत संगीतले प्रेमकथालाई झनै सिगार्ने काम गरेको छ ।
समरको भूमिकामा देखिएका सन्तोषको अभिनय राम्रो छ । उनी डेब्यु अभिनेता भएको कहिँ कतै अनुमान लगाउने ठाउँ छाडेका छैनन । पूजाले भने अझ केही मेहनत गर्ने पर्ने देखिन्छ ।
सरोज खनाल, निर्मल शर्मालगायतका कलाकारको अभिनय चलचित्र अनुसार सुहाउँदो छ । ती कलाकारले चलचित्रमा गहनाको काम गरेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा द्वन्द्व, कमेडी र सामाजिक कथासमेत मिश्रित चलचित्र रमाइलो छ ।
एक हदको रमाइलो छ फिल्ममा । यही रमाइलोका लागि निर्माता शिव न्यौपानेले लगानी गरेका छन् । समिक्षकलाई छाडेर मनोरञ्नजका लागि चलचित्र हेर्ने हो भने दर्शकको लागि पैसा असुल्छ ।
'बेबी आई लभ यू’